Uthathe isandla esimnandi sikaninakhulu oseziphilisa ngokupheka. Uxoxe noSIMANGALISO NTSHANGASE - Umbele I SMME Profiles I Labour I Economics I Agriculture I Executive Interviews I Personal Finance News
UNksz u-Amanda Mseleku, umsunguli we-Eve’s Eatery Cuisine yaseMthwalume, KwaZulu-Natali
Uthathe isandla esimnandi sikaninakhulu oseziphilisa ngokupheka. Uxoxe noSIMANGALISO NTSHANGASE
UKUKHULELA emndenini wabantu abakhonze ukupheka, ikakhulukazi uninakhulu osandla sakhe esimnandi ebhodweni yikona okwatshala imbewu yothando lokupheka.
UNksz u-Amanda Mseleku, oneminyaka ewu-33, uwumnikazi we-Eve’s Eatery Cuisine, ibhizinisi lakhe lokudla. Lo somabhizinisi ungowaseMfazazane, eMthwalume, oGwini oluseNingizimu yeKwaZulu-Natali. Wenza unyaka wokugcina ezifundweni zobuthisha e-UNISA.
I-Eve’s Eatery Cuisine uyiqale ngonyaka odlule nakuba eyibhalise kulo nyaka. Uthi okwenze ikhono lakhe lokushaya ibhodwe walenza ibhizinisi yingenkathi kubhoke iCOVID-19 ngonyaka odlule. Bekuthi njalo uma ephekile afake izithombe zezibiliboco zakhe ezinkundleni zokuxhumana, abantu abaningi bangawuvali umlomo.
“Kuqale lapho-ke abantu bengibuza ngezithako engizisebenzisayo ukwenza loku kudla. Ngaqala ngasebenza njenge-private chef ngiphekela abantu emakhaya abo. Kuthe ngokuqhubeka kwesikhathi ngagcina sengiqala ibhizinisini lokupheka,” kusho yena.
Ezase-Eve’s Eatery Cuisine
Ugcine esengeze namakilasi okupheka ngenhloso yokucija abanothando lokupheka.
“Amakilasi ami okupheka ngiwenza ezindaweni ezihlukene ngenxa yokuthi baningi abantu abakhombisa intshisekelo yokupheka, ngakho ngiye ngihambele izindawo ezihlukene, lapho engifike ngicije khona abantu ngokushaya ibhodwe,” kusho uNksz uMseleku.
Uthe eqala leli bhizinisi ubezenzela yonke into yedwa njengoba manje esenezisebenzi ezintathu asebenzisana nazo. Uthi enye yezinselelo abhekene nazo manje wukumba eqolo kwamanani okudla.
UNksz uMseleku nethimba le-Eve’s Eatery Cuisine
“Ukukhuphuka kakhulu kwentengo yokudla ekubeni abantu bengenayo imali kwenza kube lukhuni ukusebenza, lokho okuphoqa ukuthi umuntu aqhubeke nokusebenza ngokuzikhandla ukuze ahlenge ibhizinisi,” kusho uNksz uMseleku.
Uthe amanani abo aqala kuR65 i-takeaway kuye ngokuthi hlobo luni lokudla futhi uliphekela abantu abangaki.
Uthi ibhizinisi selimfundise ukukwazi ukuzimela, ukuba nesibindi nokukholelwa emaphusheni akhe.
Weluleke abasafisa ukungena kwezamabhizinisi ukuthi babe nohlelo oluqondile lwabafuna ukukwenza “bese bengalindi-ke ukuthi baze babe nesigidi samarandi ukuze baqale, kodwa abasebenzise loko okuncane abanakho ukuqala bese bekhula ngendlela”.
Uthi ufisa ukuthi i-Eve’s Eatery Cuisine igcine isinendawo yokudlela okuzotholakala kuyona zonke izibiliboco zayo.
“(Engiphezu kwakho manje) wukuthi kuphele lo nyaka senginendawana yami eMthwalume abantu abazokwazi ukuthola kuyona ukudla nsuku zonke njengoba okwamanje ngisasebenzela ekhaya,” kuphetha uNksz uMseleku.
Facebook: Amanda Eve Mseleku
Ngemva kokungawutholi umsebenzi awufundela, wafikelwa wumcabango webhizinisini ezishisela inyama osedayisa ngamalahle. Uxoxe noTEBOGO MOKWENA